/blog/gallery/Kedu otu Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) si arụ ọrụ maka ndị na-ahụ maka ahụ
Ihe na 11 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
1. Gịnị bụ Pyridoxal Hydrochloride?
Pyridoxal Hydrochloride ma ọ bụ vitamin B6 bụ vitamin a na-agbanye mmiri mmiri nke a na-ahụkarị n'ihe oriri. A na-ejikarị ya dị ka nri nri.
Mgbe ejiri ya dị ka mgbakwunye, Pyridoxal Hydrochloride nwere ike ịgwọ ma ọ bụ gbochie ọtụtụ nsogbu ahụike. A na - ewere ya na ntụtụ, ọnụ ma ọ bụ mgbakwunye nri.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ewu ụlọ, vitamin a dị mma maka gị n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ọrụ bara uru na ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na - enyere ahụ gị aka ịme lipids, carbohydrates, na amino acids nke bụ ihe niile dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ọma.
Isi mmalite nke Pyridoxine hydrochloride vitamin B6 na nri gụnyere ọka, ọkụkọ / tolotolo, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi.
2. Kedu ihe kpatara bodybuilders ji achọ vitamin - pyridoxine Hydrochloride?
Kedu ihe kpatara vitamin ji dị mkpa maka ndị na-aru aru. Maka ị rụchaa ọrụ niile ị na-eme n’ụbọchị, ị ga-enye ahụ gị nri n’ụdị nri dị mkpa dị iche iche. Defghazighi nri n’ime nri ndị a nwere ike imebi ụzọ metabolic gị. Nke a ga - eduga na arụmọrụ dị ala na arụmọrụ adịghị mma.
Dịka onye na-ewu ụlọ, ị ga-achọ nri ndị ọzọ karịa ndị na-akwalite ibi ndụ rụrụ arụ. B-6 pyridoxine hydrochloride dị gị ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụ ihe a chọrọ na phosphorylase muscle, ọrụ nke metụtara metabolism glycogen. Na nkenke, ịchọrọ vitamin B6 maka metabolism dị mma. Vitamin B6 na-eme ka ọrụ nke enzymes na-ekere òkè na ndakasị protein.
Mmetụta Pyridoxine hydrochloride Ahụ nwere ọtụtụ ihe metụtara ya na protein metabolism. Ọ bụ ya mere mgbe ị na-eji ya, ọ ga-adị mma ma ị rie nri ụtụtụ protein tupu ị kụrụ mgbatị ahụ. Alsonwekwara ike iri nri ndị nwere protein dị na oge ọrụ gị, ebe ị na-azụ ọzụzụ, ma ọzụzụ gachaa tupu ị lakpuo ụra.
Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ị na-eleghara nri ndị ọzọ anya. Ahụ gị chọrọ ọtụtụ mineral ndị ọzọ dị mkpa iji rụọ ọrụ ọfụma yana chebe gị pụọ n'ọrịa.
3. Kedu mmetụta Pyridoxine Hydrochloride dị ka vitamin na ahụ ike?
Ihe kpatara ịchọrọ iji were B6 zuru oke bụ na ọ na-enye aka nke ukwuu na mmeghachi ọgwụ kemịkalụ metụtara amino acid na protein.
Dịka onye na-ewu ụlọ, ịchọrọ ya karịa maka eriri-sel gị. Havekwesiri iwelie mkpụrụ ndụ ọbara uhie gị iji mee ka njiri mmiri dị ọcha ma gbaa mbọ hụ na ahụ gị zuru oxygen.
Ihe ọzọ mere ịchọrọ B6 bụ na ọ na - eme ka ọkwa gị iguzogide nrụgide dịkwuo mma. B6 na -eme ka ígwè dị n’ime nri gị ka ị nwekwuo ike. Akwara gị chọrọ ọtụtụ ígwè na hemoglobin (oxygen) karịa ịtachi obi.
Alsonwekwara ike dị ukwuu n'oge ọrụ. Pyridoxine hydrochloride na-erite ahụ gị uru site na ịba ụba ọnụego nke ọkụ nke carbohydrates n'ahụ gị. Nke a na - enyere gị aka inweta ike zuru oke.
N'oge ọzụzụ, a ga-enwe nrụgide na usoro nrụpụta ume nke ahụ gị. A ga-enwekwa mgbanwe n’anụ ahụ gị nke na-esite n’ọrụ na-eme ike. Ọzọkwa, ị ga-efufu ọtụtụ nri na-edozi ahụ na feces, mmamịrị, na ọsụsọ n'ihi ụba metabolism.
Maka ebumnuche ndị a, ị ga-achọ itinye akwụkwọ nri nke ahụ gị. Can nwere ike mee nke a site na ị supụ mmezigharị maka idozi ma mekwaa oke anụ ahụ gị. Nke a ga-ahụ na anụ ahụ gị dịgidere ma sie ike. Enweghị mgbakwunye dị mma karịa vitamin PyXoxine hydrochloride B6 mgbe ịchọrọ ịmaliteghachi uru ahụ gị.
4. Akụkọ ihe mere eme nke Pyridoxal Hydrochloride
Pyridoxal Hydrochloride (65-22-5) emere ya na 1939 mana achoputara ya na 1934. Paul Gyorgy, onye dibịa bekee bụ onye nyocha ahụ. Ọ kpọrọ ya aha ya dị ka vitamin B6 ma jiri ya gwọọ ọrịa akpịrịkpa akpịrị, nke dị na oke.
Afọ ise mgbe nchọpụta ya gasịrị, onye sayensị ọzọ, Samuel Lepkovsky jisiri ike kewapụ ya na ngalaba osikapa ka inweta pyridoxine hydrochloride ntụ ntụ.
Na 1939, Folkers na Harris kpebiri usoro nke pyridoxine. Afọ isii ka nke ahụ gasịrị, Snell gosipụtara na B6 nwere usoro abụọ: pyridoxamine na pyridoxal. Aha Pyridoxal Hydrochloride bịara n'ihi na vitamin B6 bụ otu dakọtara na Pyridine.
Taa, Healthtù Ahụ Ike includeswa gụnyerePyridoxal Hydrochloride na Ndepụta nke Ngwọta Di Mkpa. Nke a bụ n'ihi na ha na-ewere ya dị ka ọgwụ kachasị mma na nke kachasị dị mkpa achọrọ na usoro ahụike. A na enweta ya na tebulu dịka ọgwụ a na-enweta maka ọgwụ ike.
5. Usoro onunu ogwu nke Pyridoxal Hydrochloride maka ndi aru aru
N'etiti B-vitamin, Pyridoxal Hydrochloride bụ ihe kachasị mkpa maka ahụike na anụ ahụ nke anụ ahụ. Ọ na - enyere aka na uto nke mkpụrụ ndụ ọhụrụ, na - akọwa Pyridoxine hydrochloride na-ewuli elu ike. B6 na-enyekwa aka n'ịhazi edozi potassium na sodium, yana n'ịmepụta nucleic, DNA na RNA nke ọ bụkwa akụkụ nke ya.
Mụ nwanyị nwere ike iji ya mezie homonụ na inye aka na mgbochi n'oge afọ ime. Ọ na - alụso mbido mmiri nke na - ebute ma na - ebelata ihe mgbu na ọnya afọ.
Enweghi ike nke Pyridoxal Hydrochloride na-eduga na ahụ ịma jijiji, mgbakasị ahụ, ehighị ụra nke ọma, adịghị ike, ire na-egbu egbu, mbọ aka, ọrịa ogbu na nkwonkwo na osteoporosis.
Usoro ọgwụgwọ akwadoro FDA bụ 2mg, mana na mgbakwunye, ọgwụ a na-agbakarị bụ 20mg. Pyridoxal Hydrochloride nwere ike ịbụ ihe na-egbu egbu mgbe ị na-ewe ihe karịrị 2000mg.
Agbanyeghị, dịka otu nnyocha si kwuo, usoro Pyridoxal Hydrochloride nke akwadoro maka ndị nọ n'ọrụ site n'aka gọọmentị US ezughi oke.
Nke a pụtara na ndị na - amachi ụdị nri dị iche iche ma ọ bụ gbochie calorie nwere ike ịnwe ihe egwu nke enweghị ụkọ. Ya mere, ha nwere ike ghara erite uru na nsonye pyridoxine hydrochloride ma ọ bụrụ na ha were ọgwụ ahụ dịka gọọmentị tụrụ aro.
Dabere na nsonaazụ nke nyocha a, ọ ga-abụ ihe amamihe ịkpọtụrụ ọkachamara ahụike gị iji nyere aka chọpụta usoro kachasị mma / zuru oke pyridoxine hydrochloride maka gị.
6. Pyridoxal Hydrochloride ji ọgwụ
Enweghị oke ụkọ vitamin B6 na US, mana ọ nwere ike ịbụ ndị agadi na ụmụaka. Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa dịka hyperthyroidism, ọrịa celiac, ọrịa autoimmune, ọrịa akụrụ, ma ọ bụ ị orụ mmanya na-aba n'anya mgbe ahụ ị nọ n'ihe egwu dị elu nke ịta ahụhụ ụkọ vitamin B6.
Ahụ ahụ enweghị ike iwepụta vitamin B6, yabụ ị ga-enwerịrị ya site na mmeju ma ọ bụ nri. Ọ dị mkpa iri ezigbo vitamin iji gwọọ ma gbochie ọrịa na-adịghị ala ala yana maka ahụike kachasị mma.
Nke a bụ itoolu ọgwụ pyridoxine hydrochloride na-akwado sayensị:
(1) Na -ebelata mgbaàmà nke nkụda mmụọ ma na-eme ka ọnọdụ dị mma
B-6 pyridoxine hydrochloride na arụ ọrụ dị mkpa na nhazi nke ọnọdụ. Nke a bụ n'ihi na ọ na - emepụta neurotransmitters na - edozi mmetụta. Pyridoxine hydrochloride maka ịtụrụ ime dị ezigbo mkpa maka ụmụ nwanyị nwere mmetụta mmụọ ma ọ bụ nwee ọnọdụ omume nke kpatara adịghị mma nke homonụ n'oge afọ ime.
B6 na-ebelatakwa ọkwa ọbara nke homocysteine, amino acid na-ahụ maka nsogbu ụbụrụ dịka ịda mba. Imirikiti ọmụmụ ejiriwo ihe mgbaàmà ndị metụtara nkụda mmụọ na ọkwa pyridoxine hydrochloride dị ala.
(2) Na-ebelata ihe egwu Alzheimer ma na-akwalite ahụike ụbụrụ
A maara Vitamin B6 maka ọrụ ya na nkwalite ọrụ ụbụrụ yana mgbochi nke ọrịa Alzheimer. Ọ na-agbadata ọkwa nke homocysteine ​​n'ime ọbara si otú a na-ebelata ihe ize ndụ nke mbelata ihe na ebe nchekwa Alzheimer.
Otu nnyocha metụtara ndị okenye 156 nwere nkwarụ dị nro na ọkwa hycysteine ​​dị elu chọpụtara na usoro pyridoxine hydrochloride dị elu na-ebelata ọkwa homocysteine ​​n'ime ọbara ma belata mbibi nke akụkụ ụbụrụ ụfọdụ nke nwere ihe egwu Alzheimer.
(3) Na-egbochi ma na-agwọ Ọrịa nkwonkwo
Vitamin B6 na - egbochi ma na - agwọkwa anaemia nke kpatara ụkọ ya. Nke a bụ n'ihi na ọ na-ekere òkè n'ịrụpụta haemoglobin. Hemoglobin na-enyefe akwara oxygen n’ahụ mmadụ. Site n'ọbara haemoglobin dị ala, sel gị agaghị enweta oxygen zuru oke maka nke a, ị ga - amalite anaemia ma nwee ike ọgwụgwụ ma ọ bụ daa ike.
E nweela vitamin B6 dị ala na anaemia, ọkachasị ụmụ nwanyị ndị na-amụ nwa ma ọ bụ ndị dị ime.
(4) Na-agwọ ọrịa nke Premenstrual Syndrome (PMS)
Otu uru pyridoxine hydrochloride bụ na enwere ike iji ya mee ihe iji gosipụta mgbaàmà nke PMS gụnyere mgbakasị ahụ, nkụda mmụọ, na nchekasị. Ndị na-eme nchọpụta kwenyere na vitamin B6 nwere ike ịgwọ ọrịa ndị a n'ihi na ọ na-emepụta neurotransmitters na-enyere aka na nhazi ọnọdụ.
N'ime obere ọmụmụ, achọpụtara na akara ngosi PMS gụnyere nchegbu, mgbakasị ahụ, na ọnọdụ mgbanwe nwere ike belata nke ukwuu site na iwere 200mg nke magnesium yana 50mg nke vitamin B6 kwa ụbọchị.
(5) Na-emeso ọgbụgbọ n'oge ime
Kemgbe ọtụtụ afọ, ejirila vitamin B6 mee ihe maka ọgwụgwọ ọgbụgbọ na ọgbụgbọ n'ime ụmụ nwanyị dị ime. Ọ bụkwa ihe eji eme Diclegis, ọgwụ a na-eji agwọ ọrịa ọrịa ụtụtụ. Nke a bụ uru kachasị elu nke pyridoxine hydrochloride maka ụmụ nwanyị na-arịa ọrịa a n'oge ha dị ime.
Iri pyridoxine hydrochloride ziri ezi n’oge ime dị n’etiti mmadụ n’otu n’otu. Ọmụmụ ihe metụtara ụmụ nwanyị dị ime 342 hụrụ na ntụtụ kwa ụbọchị nke 30mg nke vitamin belatara mmetụta ha nke ọgbụgbọ nanị ụbọchị ise ka ịmalite ọgwụgwọ ahụ.
N'ime ọmụmụ ọzọ metụtara ụmụ nwanyị dị ime 126, a na-ebelata nke ọgbụgba na ọgbụgbọ belata nke ukwuu site na iwere 75mg nke vitamin B6 kwa ụbọchị. Ihe mgbaàmà ahụ belatara site na 41% mgbe ụbọchị anọ gasịrị na-egosi ịdị irè nke pyridoxine hydrochloride maka ịtụrụ ime.
(6) Na-ebelata Ewu nke Ọrịa Obi site na igbochi akwara akwara
Pyridoxine hydrochloride na-ekere òkè dị ukwuu na igbochi ụdọ akwara ndị dị na ya wee belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi. Ọ bụrụ na ị nwere vitamin B6 dị ala, ihe ọghọm gị nwere ibute ọrịa obi ọ fọrọ nke nta ka o jiri nke abụọ nwere vitamin dị n'ọbara. Vitamin B6 na -ewepu ohere nke akwara artlogger site na ibelata ogo nke homocysteine ​​n'ime ọbara.
N'ime otu ọmụmụ metụtara oke ndị na-adịghị ike na vitamin B6, a chọpụtara na ha nwere ọkwa cholesterol dị elu ma ha mepụtara ọnya. Ihe ndị a nwere ike ịkpachara anya ọgbụgba ọkụ ma ọ bụrụ na ekpughere ha na mmiri. Researchfọdụ nyocha metụtara ụmụ mmadụ egosikwala na vitamin B6 nwere ike igbochi ọrịa obi.
(7) Na-enyere aka igbochi Ọrịa cancer
Nke a bụ ikekwe kachasị mkpa nke ejiri pyridoxine hydrochloride enyere oria cancer taa. Ọ bụrụ na ị na-ezuru Pyridoxine hydrochloride, ohere gị ibute ụdị ọrịa kansa ga-ebelata. Ihe kpatara nke a edoghị anya mana ndị ọrụ nyocha kwenyere na ọ nwere ike na ikike nke B6 iji lụso mbufụt na-akpata ọnọdụ adịghị ala ala dịka ọrịa kansa.
Mgbe ha tụlesịrị ihe ọmụmụ 12, ụfọdụ ndị nyocha kwubiri na ọkwa ọbara zuru oke nke B6 na-esonye n'ihe ike dị ala nke ịmalite ọrịa cancer colorectal. Ọ bụrụ na ịnwere ọkwa B6 dị elu, ohere ị nwere ibute ọrịa ịba ọcha n'anya ga-agbada site na 50% ma e jiri ya tụnyere ndị nwere nnukwu B6.
N'ime ụfọdụ nyocha emere iji chọpụta mmekọrịta dị n'etiti ọkwa pyridoxine hydrochloride yana ọrịa ara ara, achọpụtara na ọkwa zuru oke nke B6 n'ọbara na-ebelata ihe ize ndụ nke kansa ara, ọkachasị ụmụ nwanyị postmenopausal.
(8) Na-egbochi Ọrịa Anya ma na-akwalite ahụike anya
Vitamin B6 na - enyere aka igbochi ọrịa anya, ọkachasị ndị metụtara ịka nká - ọgbụgba metụtara afọ (AMD). Mgbe ị nwere ọkwa dị elu nke homocysteine ​​na-aga n'ime ọbara gị, ị ga-enwe ihe egwu dị elu nke ịmalite AMD. Pyridoxine hydrochloride na-enyere aka belata ọkwa nke homocysteine ​​dị n'ọbara, yabụ belata nsogbu nke AMD.
Dabere na otu nnyocha emere na ụmụ nwanyị karịrị 5,000, a chọpụtara na otu vitamin kwa ụbọchị B6 tinyere vitamin B12 na folic acid na -ebelata ohere nke AMD site na 40%, ma e jiri ya tụnyere ndị na-anaghị a vitaminsụ vitamin ahụ.
Nnyocha ọzọ jikọtara nsogbu anya na ọkwa ọbara dị ala; tumadi nsogbu anya na - eduga na mgbochi nke veins ejikọtara na retina. E tinyekwala ala dị ala nke pyridoxine hydrochloride yana nsogbu nke retina.
(9) Na-emeso Ọrịa ogbu na nkwonkwo Rheumatoid
Ọ bụrụ na ị na-arịa Rheumatoid Ọrịa ogbu na nkwonkwo, iwere B6 nwere ike inye aka belata ihe mgbu gị. Ọrịa ogbu na nkwonkwo na-ebelata ọkwa nke B6 n'ime ahụ ma ọ dị mkpa ka agbazigharị ọkwa a.
Ọmụmụ ihe emere na ndị okenye 43 chọpụtara na ntụtụ kwa ụbọchị nke njikọta nke 5mg nke folic acid na 100mg nke B6 belatara ọkwa nke ụmụ irighiri ihe na-emetụta ahụ ha mgbe izu 12 gasịrị.
7. Nsonaazụ Pyridoxal Hydrochloride
Pyridoxine hydrochloride bụ nchekwa maka ndị ọrụ na-ahụ maka ya. Ọ dịkwa mma maka iji ọgwụ. Agbanyeghị, ọ nwere mmetụta dị iche iche na mmadụ dị iche iche offọdụ mmetụta pyridoxine hydrochloride gụnyere:
Ihe ịrịba ama nke mmeghachi omume nfụkasị dị ka nhịahụ iku ume, hives, egbugbere ọnụ gị, ihu, akpịrị ma ọ bụ ire
Ndalata belata na-emegharị jijiji, okpomọkụ, na emetụ aka
Inwe ahụ ike gwụrụ ma ọ bụ ịta ụta n'aka gị
Ọnụọgụ dị nwayọ ma ọ bụ ịma mma, ịma ma ọ bụ inwe mmetụta dị ọkụ n'ụkwụ na aka
Ume gburugburu gị n’ọnụ ma ọ bụ n’ụkwụ gị
Loss nke agụụ
Ihe nnochita na anwu onwa
Ọ bụrụ na ị na-enwe oke mmetụta pyridoxine hydrochloride mgbe ahụ ọ ga-akara gị mma ịchọ nlekọta ahụike.
8. Kedu ihe ịdọ aka na ntị na ntị maka Pyridoxal Hydrochloride?
Usoro ogwu Pyridoxal Hydrochloride dị oke elu nwere ike ibute nsogbu akwara ozi. Ọrịa ndị a nwere ike, n'aka nke ya, bute nsogbu nke nkwụsi ike na enweghị mmetụta n'ụkwụ. Enwekwara ụfọdụ akụkọ na oke usoro nke pyridoxine hydrochloride nwere ike ibute mmeghachi omume anụ ahụ. Luckly, mgbe ị kwụsịrị nnukwu ọgwụ, ị ga-agbake zuru oke.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ịghara ị doụ ọgwụ dị elu n'oge afọ ime. Naanị dọkịta ruru eru kwesịrị ikpebi ọgwụ Pyridoxine hydrochloride n'oge ime. Rịba ama na ma ị bụ onye na-ewu ahụ ma ọ bụ na ịnweghị, ị ga-ewere karịa 100mg nke pyridoxine hydrochloride kwa ụbọchị belụsọ na gị na onye na-ahụ maka ahụike gị akparịta ụka.
Mgbe ị na-eji ọgwụ Pyridoxal Hydrochloride, ikwesighi ịkwụsị, bido iji ya na ọgwụ ọzọ, ma ọ bụ gbanwee usoro onweghị nkwado nke onye na-ahụ maka ahụike gị.
Agbanyeghị Pyridoxal Hydrochloride enweghị mmekọrịta dị oke ma ọ bụ nke siri ike ya na ọgwụ ndị ọzọ, ọ dị mma ịkpachara anya mgbe niile.
Cordarone (Amiodarone) na-eme ka mmadụ nwekwuo ọmịiko maka ìhè anyanwụ mgbe ejikọtara ya na B6. Nchikota a nwere ike ime ka o nwekwuo ohere inweta ahuhu na akpukpo ahu, nye oku, ma obu anwu ntolite n’ahu gi. Jide n'aka na ị ga-eyi uwe nchebe ma ọ bụ mkpọchi anwụchi mgbe ị na -echikota nke a.
Ahụ gị na-agbaji Luminal (Phenobarbital) iji wepu ya. Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) na-abawanye ọnụego nke Luminal na-akụda site na ibelata ịdị irè ya na ahụ gị.
Dị nnọọ ka Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) mebie kemikal a ma kpochapụ ya na ahụ gị. Anweta ngwakọta Dilantin na Pyridoxal Hydrochloride ga-ebelata ịdị irè nke ihe dịbu ahụ gị. Nke a nwere ike ịbawanye ohere ị nwere inwe ihe ọdịdọ.
Ọgwụ ndị ọzọ na-emekọrịta Pyridoxal Hydrochloride gụnyere:
Pyridoxal Hydrochloride nwere mmekọrịta dị nro karịa karịa ọgwụ 70 dị iche iche. Yabụ, tupu iji ọgwụ ọ bụla ejikọta ya, hụ na ị kpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike gị.
B6 na-arụ ọrụ nke ọma na B-vitamin MCT's ndị ọzọ, CLA, zinc, sodium, potassium, magnesium, na vitamin C nke ọma.
Uru Pyridoxal Hydrochloride dị na ndị na-ahụ aru aru dị ọtụtụ. Ọbụghị naanị ndị na-ahụ ozu, ọ dị mkpa ka onye ọ bụla na-eme egwuregwu na-enwe vitamin a. Agbanyeghị, ịkwesịrị iji ya na-agbasochi usoro ọgwụgwọ ndị dọkịta chọrọ ka ọ dị.
Nnukwu ọrụ ndị na-ewuli elu na-eduga n'iwepụ mkpụrụ ndụ na akwara. Ọ kachasị mma iji dochie ndị a na-eji mgbakwunye vitamin B6. Mgbe ịzụrụ a Pyridoxal Hydrochloride Ngwa ahịa, hụ na ị ga - eme ya site na mmalite ndị ama ama dịka Aasraw. Iji nweta ezigbo Pyridoxine hydrochloride ịzụta, dị nnọọ gaa aasraw.com taa ma mee iwu.
1 Osswald, H, et al, 1987 Mmetụta nke sodium ascorbate, menadione sodium bisulfite ma ọ bụ pyridoxal hydrochloride na nsị na antineoplastic nke N-methylformamide na P 388 leukemia ma ọ bụ M 5076 sarcoma na mice Toxicology 43XXXX PMID: 2
2 Reimer, LG, et al, 1983 Mmetụta nke pyridoxal na uto nke nri nri streptococci na nje ndị ọzọ na n'ọbara ọbara atụrụ Diagnostic microbiology na ọrịa na-efe efe 1 (4): 273-5 PMID: 6667606
3 Zygmunt, WA, et al, 1962 REVERSAL OF d-CYCLOSERINE INHIBITION OF GRCTTH BY ALANINE Journal of bacteriology 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
Raw Isotretinoin (Accutane) maka ihe otutu: Na-emeso ihe otutu na Isotretinoin
Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Hormone Mmekọahụ	Synephrine HCL powder - burner fat na mmepu oke
10 110417 (88-4-XNUMX) Dolastatin